Agha dị nsọ: Otu n'ime nsogbu kachasị * NIX | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
Enwere isiokwu m na-enwebeghị ike ịgbanarị na oge m niile na-awụli elu n'etiti nkesa, ịhọrọ mmemme, mmemme, ọbụlagodi ịgụ na ma ọ bụ ihe niile metụtara Linux ma ọ bụ UNIX ... Agha Dị Nsọ (Agha Nsọ na nke kacha mara amara Emechara).
1 Agha nsọ mbụ?
2 Ndị ọzọ atụ
3 Mma agha nwere ihu abụọ
4 Na teknuzu larịị
5 Ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abata
5.1 Echiche nke m n’okwu a
7 Ikpeazụ echiche
Agha nsọ mbụ?
Ọfọn okwu ahụ mere ka ọ bụrụ nke ọha na eze Danny Cohen ke ibuotikọ emi mkpa, karie kpọmkwem na esemokwu dị n'etiti usoro ntakiri-endian vs ya nnukwu-endian. Maka ihe kachasị mkpa, ndị ịda mba na-akọwapụta usoro ịgụrụ ndị nke ọ bụla, nke ọ bụla na-anọchi anya a nkà ihe ọmụma dị iche iche na maka otu ihe a, ha enweghị nkwekọrịta site na nkọwa. Nke a na-ekewa ụwa ndị na-arụ ọrụ ụzọ abụọ ma na -emepụta obere Satellites a na-akpọ etiti-endian, nke a na-ejikarị na ARM na teknụzụ ndị ọzọ, nke nwere ike ịgụpụta usoro abụọ.
Ndị ọzọ atụ
Otu n'ime ihe atụ kachasị mma taa anyị nwere agha ebighi ebi n'etiti GNOME na KDE, ochie esemokwu n'etiti vim na emacs, na ọbụna na sistemụ arụmọrụ, ndị amachaghị nke ọma esemokwu n'etiti Linux na [Free | Net | Mepee] BSD. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe atụ, nke abụrụla isiokwu nke ọtụtụ ederede, edemede, ihe edemede, ọbụlagodi akwụkwọ. Ana m echeta ihe O'Reilly Book on Bash nke onye ụfọdụ dere emacsNke a pụtara ìhè site na ụfọdụ okwu ndị a na-ahụkarị megide vim, dị ka enweghị "eke" si jiri ụzọ mkpirisi keyboard ya. Na nkenke, ọnụọgụ nke ozi bara ụba na isiokwu ndị a.
Mma agha nwere ihu abụọ
Akụkọ ihe mere eme egosila anyị na ọbụlagodi site na oke asọmpi kachasị mma a na-amụ ihe dị mma, otu n'ime ha bụ ọganihu na teknụzụ. Ekwuola ọtụtụ ihe gbasara mmebi nke C na C ++, ụfọdụ na-akpọ ndị ọzọ "ndị ọcha" ma na-ekwu asusu m ka nma. Ọ bụ ezie na n’otu oge n’akụkọ ihe mere eme C ++ jiri C mee ihe dị ka ntọala iji mepụta arụmọrụ ọhụrụ (anyị na-ekwu maka afọ 30 gara aga) taa, asụsụ abụọ ahụ agbanweela nke ukwuu nke na a ga-ewere ha dị ka ndị abụọ kpamkpam, ọ dịkwa ekwuru banyere ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọrụ ahụ n'akụkụ abụọ. N'aka nke ọzọ anyị nwere ngbanwe anya nke ụfọdụ Usoro dị ka Qt ma ọ bụ WebKit, nke a na-ejikarị na KDE na GNOME. “Ikike” a na-enyere ha abụọ aka ịmụrụ anya ma melite arụmọrụ ha na-enye kwa ụbọchị.
Na teknuzu larịị
Ọfọn, mgbe anyị hụrụ nke a site n'echiche teknụzụ kpamkpam, nhọrọ ndị ahụ nwere ike ịbụ "ebumnuche" ka mma ma ọ bụ ka njọ, na nke a bụ eziokwu. ihe omimi, onye nwere ike ịkọwa software ma ọ bụ mmemme na usoro nke oge, ma ọ bụ ibu, ma ọ bụ nrụgide, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ a pụrụ ichetụ n'echiche. Nke a na-enyere mkpebi nke onye ọ bụla aka, ebe ọ bụ na ọ na-enye ike na arụmụka ahụ, ọ nwere ike ịkọwapụta nke ọma mkpa ọ dị mkpa ikpuchi, yana ihe egwu ọ ga-anabata. N'oge a ihe doro anya karịa ma ọ bụrụ na a na-eme ya n'ụzọ dị mma, ha nwere ike idozi ọtụtụ esemokwu, mana nsogbu ahụ na-ebilite mgbe ...
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abata
Nke a bụ isi okwu dị nro, yabụ m ga-agba mbọ ka m ghara iche banyere ya nke ukwuu. Ihe niile dị mma ruo n'ókè nke oke na-amalite, mgbe ị malitere ikwere na ihe ngwọta gị dị mfe mma karịa ihe ọ bụla ọzọ Onye obula kwesiri ikwenye gi Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime isi okwu kachasị dị mgbagwoju anya na Open Source, na ọbụlagodi Software efu.
Enweela m ohere isoro ndị otu a kwurịtara okwu, na ikwu eziokwu na ha abụọ dịcha mma ndọrọ ndọrọ ọchịchịRuo n'ókè nke ịgwa m: "Ọ bụrụ na i soro ha, esola anyị." Ma ọ bụ na maka ịtụrụ ya banyere ndụ, enwere naanị oji ma ọ bụ ọcha, enweghị isi ma ọ bụ isi awọ. Ugbu a, ọtụtụ ga-ekwenye na m na ndị ọzọ ọ bụghị nke ukwuu, mana ndụ abụghị naanị oji na ọcha, isi awọ na ndo dị (ọbụlagodi na ihe ndị ha na-ekwesịghị ịdị, mana ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere).
Ihe na-atọ ọchị banyere ihe a niile bụ na ndị "na-agba" otu ndị a, ma ọ dịkarịa ala ndị m nwetere ohere izute, anaghị eme mmemme, ha na-eche na ezigbo sọftụwia gafere sọftụwia n'onwe ya na mmemme abụrụla mebiri na echefuru.
Echiche nke m n’okwu a
Naanị m ga-eme ihe ndepụta nke ihe m weere dị mkpa banyere ngwanrọ na-emeghe na isi mmalite, n'ezie ha abụọ nwere ọtụtụ isi, mana ha dị iche na ndị na-abụghịkarị, na ọ ka bụ esemokwu maka ha abụọ n'akụkụ.
Ekwenyere m na n'ime ụwa taa, sọftụwia nkeonwe (nke na-egbochi gị nnwere onwe dị mkpa nke ike iche echiche y ịmụta) bụ onye iro kasịnụ. Ọ na-amasịkarị m ịma ihe kpatara ihe na-eme na kọmpụta m, ana m ewerekwa na mmemme anaghị ekwe gị mara ihe na-eme ọ bụ onye iro kacha ukwuu ị nwere.
N'oge a Open Source na Free Software kwere (Ọ bụ ezie na ha achọghị ịnakwere ya), na ọ bụ nke ahụ maka ebumnuche bara uru na nke ọzọ maka ebumnuche ziri ezi, ha chọrọ ka ndị ọrụ nwee ike itinye aka ma mụta site na koodu isi.
Isi ihe nsogbu malitere bụ banyere Libertad nke nkesa. Open Source bụ ntakịrị ihe mgbochi karịa sọftụwia efu, nke a bụ mmalite maka ọtụtụ esemokwu nke nkà ihe ọmụma. Mana m na-ahụ ya n'ụzọ ndị a:
N'ime ụwa a nwa abịa na-software nkeonwe, nke na-anaghị enye gị ohere ịmara n'ezie ihe na-eme, ma ọ bụ ihe kpatara na ọ na-eme. N'otu oge isi awọ, anyị nwere Open Source, nke na-enyeghị gị ihe niile nnwere onwe ma ọ dịkarịa ala ọ na-enye gị ohere ịnweta koodu dịnụ iji mụta ma melite. Akụkụ Blanco ga - agh? ngwanrọ n'efu, maka inwe ezigbo echiche ụkpụrụ nke ngwanrọ a ga-adị maka obodo ma nyere onye ọ bụla aka na-atụghị anya uru na nloghachi.
Ọ bụrụ na mmadụ niile dị ka ya BlancoEgo agaghị adị mkpa, mana enwere ike ihe ga - adị iche naanị na ndị mmadụ ga - arụ ọrụ naanị ọrụ, ma ọ bụghị site mkpa. N'oge a bụ ebe ịdị adị nke grays na ndụ anyị, ọ bụ ezie na mmadụ nwere ike inyere ụwa aka na ọrụ FreeWa agaghị akwụsị ịna-achọ ihe niile ọ na-achọ n’aka gị mgbe niile.
(Achọrọ m ịme nkwado ekele na onye ọrụ ibe anyị Alejandro bụ onye metụrụ aka na isiokwu kwesịrị ịdezi na post mbụ. Ikekwe e nyere ya nkọwa na-ezighi ezi na, dị ka ọ na-ekwu, onye nrụpụta nwere ike iche na ngwanrọ anaghị akwụ ụgwọ Agara m n'eziokwu na n'ime ọha mmadụ na-eme omume ọma, ebe anyị niile na-enye ndị obodo anyị ọrụ anyị n'ụzọ dị iche iche na anyị niile na-erite uru na ya, ọ dịghị mkpa ego. jiri ụkpụrụ dị oke mkpa dị otú ahụ, mkpa maka ihe dị oke mkpa dị ka ego dara ọnụ)
PS: Daalụ maka ime ka m mata ozi a na ekele maka ịkekọrịta? A sị ka e kwuwe, ọrụ dị ka kernel (Free Software) na-akwaga ihe karịrị otu ụlọ ọrụ ọtụtụ nde dollar ugbu a? )
Nke a dị ezigbo mma, mana eziokwu bụ na anyị niile chọrọ ego na ụwa a, yana agbanyeghị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nwere ike bụrụ nke kachasị Blanco enwere ike ịchọta ya, a ga-enwe ya mgbe niile acha na-achịkwa ọ bụghị naanị ahịa, kamakwa uche nke ndị na-azụ ahịa. A ga-enwerịrị ụgwọ na steeti, na ụdị ihe ọ bụla ọzọ na-amanye gị ịchọ ego.
(Ọzọkwa, na-ekwu site n'echiche nke ụkpụrụ kama ịba uru, ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka Free Software na ọ bụghị Open Source n'okwu a, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka isi mmalite, n'ihi na e nwere ọtụtụ puku ụlọ ọrụ ndị na-etinye isi obodo ha na Open Source, Uhie okpu, na ọtụtụ ndị ọzọ n'elu ndepụta a)
Nke a bụ otu n'ime ihe kachasị amasị m banyere Gentoo, ikike họrọ. Nke a abụghị naanị na-egosi ike ịhọrọ software, kamakwa na-akụzi chee maka otu otu. Dịkwa ka ebe niile, ọ dịkwa políticama n'akụkụ, na ndị ọzọ. Ma ihe dị mma bụ na enwere nnwere onwe mgbe niile họrọ, karịsịa mgbe otu n'ime n'akụkụ adịghị eso ụzọ gị si eche echiche. (Ekwesịrị m itinye nke a ebe a n'ihi na dịka ị hụworo, otu akụkụ buru ibu nke FOSS (Ihe Omume Na-emeghe ma Na-emeghe)) nkà ihe ọmụma.)
na nkà ihe ọmụma ha dị mma, ha na-enyere aka idozi nsogbu site na echiche ọhụrụ. Nke a bụ ihe ga-abara onye ọ bụla uru, mana nsogbu na-amalite mgbe otu chọrọ wetara nkà ihe ọmụma ya. Ọ dịghị mma ịsị "nke a ka mma" dịka a hụworo ọtụtụ na ụwa Linux, yana ụdị:
Ubuntu / Fedora / Mint / Manjaro /… ka Ubuntu / Fedora / Mint / Manjaro / better mma
Ha adighi adi kachasị mma, ha dị iche nkà ihe ọmụma.
Echere m na m bụ onye na-anabata ihe na isiokwu a, enwere m nkwenye na ọ nweghị ihe nwere ike ịbụ ezigbo ma ọ bụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ọ sitere n'aka mmadụ. Ihe niile nwere nuances ma ọ na-adị m ka m kọọrọ ha ihe m na-atụle ngwaọrụ. Achọghị m ime ka onye ọ bụla soro m n'ụzọ m si ahụ ma jiri teknụzụ, mana ama m na ọ bụghị ọtụtụ na-eji ma ọ bụ na-anwale ihe m na-eji, yabụ ana m agbalị ịkọrọ ya ka ndị ọzọ wee nwee isi okwu banyere ọ 🙂
Enweela m ọtụtụ oge ugbu a, ma ọ dị ka isiokwu na-adọrọ mmasị iji kwurịta.
Ọfọn, echeghị m na emetụla m ya na ederede mbụ (nke a bụ oge agbakwunyere oge), mana m na-anwa isonye na mmemme sọftụwia efu (dị ka git na kernel, ma weechat), mana m na-ejikwa ma rụkọta ọrụ Open Isi mmalite (dị ka Gentoo). Ana m ewere onwe m dịka otu n'ime ndị na-arụ ọrụ ọrụ Echere m na ọ bụrụ na ịbawanye mma nke obodo, ka anyị na-enyere aka ịgbanwe ụwa otu nzọụkwụ n'otu oge (dị ka blọọgụ ndị a 🙂). Ugbua ee, ekele 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Agha dị nsọ: Otu n'ime nsogbu kachasị * NIX
Ngosiputa di nma, enwere m obi uto. Ọ dị m ka ya bụrụ na ndị ọzọ chere echiche n'ụzọ ahụ banyere sọftụwia na ndụ n'ozuzu ha.
Daalụ 🙂 echefula ịwụghachi ọzọ maka Extra 😉
Akwụkwọ ozi ahụ masịrị m
daalụ maka oge gị
Ọnye na -bụ Ricardo Rios? dijo
Zaghachi Ricardo Rios
Ndewo, anọ m na-agụ akwụkwọ ozi gị ma ha dị m mma .. ime ihe n'eziokwu, m gbalịrị ọtụtụ distros mana enweghị m ike ịchọta nke ga-adabara m ... na ịnụ ụfọdụ echiche gbasara gentoo na-eme ka m nwee mmasị ịnwale, aka nri ugbu a, m na-eji ubuntu eme ihe ma na-enwe ezi obi, anaghịzi m amasị ya nke ukwuu site na afọ ole na ole ruo ebe a.
Ekele na ekele maka ịkekọrịta
I meela nke ukwuu 🙂 ọ bụ ihe ị ga-anwale ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị, mgbe ahụ genail 🙂 echiche ahụ abụghị ikwenye na GNU / Linux niile bụ otu ihe ọmụma ma ọ bụ ngagharị, anyị niile nwere nnwere onwe ịhọrọ ebe a, Ekele 🙂
Megadeth, Rust in Peace album. Hehehe.
Mmadu aghagh i imeghe obi ya ma nweere onwe ya ime ihe o bula.
Ezi echiche, ọ bụ ezie na m ga-achọ ịme nkasi obi na paragraf nke utopia, nke na-ekwu:
"Ọ bụrụ na onye ọ bụla dị ka ọcha, mgbe ahụ ọ gaghị enwe mkpa maka ego, mana enwere ike ihe ga-adị iche iche ka ndị mmadụ wee rụọ ọrụ naanị site na akaọrụ, ọ bụghị n'ihi mkpa."
Ọfọn, na nke a echiche na-mere n'etiti ọcha na free software, dị ka ị na-amam na:
"Akụkụ ọcha ga-abụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, n'ihi na o nwere ụkpụrụ omume ọma karịa nke sọftụwia ga - adị maka obodo ma nyere onye ọ bụla aka na - atụghị anya uru na nloghachi."
N'uche m mgbe ahụ ịsị na: "Ọ bụrụ na onye ọ bụla dị ka ọcha, mgbe ahụ ọ gaghị adị mkpa maka ego";
Isi ihe bụ na ọ dịghị m ka ọ bụ arụmụka ziri ezi ma ọ bụ nke ziri ezi; Nke a bụ ịsị: Eziokwu ahụ bụ na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọ bụla nwere ihe ọzọ gbasara nnwere onwe ma ọ bụghị gbasara Ahịa ma ọ bụ Ego. Cheta na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ, na eziokwu nke ịkpata ego, bụ ihe ndị na-ekwesịghị ịlụ ọgụ (ọ bụ ezie na ọtụtụ sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ bụ n'efu, nke a abụghị iwu, anyị niile nwere ike ịre ngwanrọ anaghị akwụ ụgwọ), Nsogbu a ebe a n'ikpeazụ na m Achọrọ ịkọwapụta na paragraf ahụ bụ na ijikọ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na nsogbu ego yana ịpụta na ị gaghị enwe ike ibi ndụ na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, n'echiche m na ọ bụ ihe na-emerụ ahụ ebe ọ bụ na isi okwu m bụ:
Nke a nwere ike ịmegharị ma gosipụta ndị mmemme iche na sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ iji rie. mgbe nke a abụghị eziokwu-
N'ikpeazụ, ma ọ bụ iji nweta ego site na ngwanrọ n'efu na-adabere na ndị ahụ metụtara (enwere ike ịme ya site na ọrụ na / ma ọ bụ site na mkpa), enwere ụdị azụmaahịa dị iche iche maka sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, na-etinye ụdị azụmaahịa ndị a ma na-agbanwe ụzọ na-ezighi ezi nke ndị mmadụ na-achọpụta software n'efu na akụkụ abụọ a ị nwere ike ịme ego (na ọtụtụ ego), ọtụtụ ụlọ ọrụ egosila na ha na-enweta nnukwu ego na sọftụwia n'efu.
N'ikwekọ n'ọtụtụ isi ihe dị na edemede (ọ bụ ezigbo isiokwu), naanị m chọrọ ịkọwa ihe m chere na m ghọtara na paragraf ahụ.
Ndewo Alejandro, daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta echiche gị. Ikekwe e nyere ya ịkọwahie ya, m ga-agba mbọ gbanwee ihe ị na-ekwu, n'ihi na o doro anya na ọ bụghị ihe m na-achọ igosipụta. Agara m n'eziokwu na na ọha mmadụ na-eme omume ọma, ebe anyị niile na-enye ndị obodo otu ụzọ na anyị niile na-erite uru na ya, ọ dịghị mkpa ego. Ọ bụghị n'ihi na ngwanrọ anaghị ewepụta ya (mana n'ihi na uru dị otu a dị oke mkpa, mkpa maka ihe dị ka ego efu) Ana m ekele gị maka ịme ka m hụ ozi a na ekele maka ịkekọrịta 🙂 E kwuwerị, ọrụ dị ka kernel ( Free software) ịkpali karịrị otu multi-ijeri dollar ụlọ ọrụ ụbọchị ndị a 😉
Nke mbu, daalụ maka ịzaghachi uche m, nke ahụ bụ nkọwa m (ọ nwere ike ịbụ ọtụtụ ịkọwa dịka enwere ndị na - agụ ya) mana ka ị na - ekwu » na ndị ọzọ n'ihi na ahụla m ihe ahụ dị ịtụnanya blog m gbalịrị ịkọwa ya), ọ dị nwute na enwere ọtụtụ ndị kwenyesiri ike na iji sọftụwia efu enweghị ike ịme ego, mgbe egosila nke ahụ.
(Okwu banyere kernel bu ihe esemokwu n'ihi okwu nke ndi nwere BLOBs) obu ezie na m ghotara isi okwu na dika i kwuru, ekwenyekwara m ya, o yiri ka obughi ihe nile nwere ike ibu oji ma obu ocha, ma obu ihe ugbu a mgbe enwere otutu uzo ị ga-aga n'okporo ụzọ nnwere onwe na ngwanrọ wdg.
Ekele, isiokwu dị mma ma ana m ekele gị maka ịkekọrịta ma were ọnọdụ nke ịkọgharị ederede iji mee ka o doo anya.
Ọfọn, nke a bụ ụzọ ụzọ abụọ, enweghị m ike ide na-eche na ihe niile dị mma, enwere m obi ekele mgbe enwere nkọwa ziri ezi ma debe nke ọma nke bara uru ịgụ, na nke ahụ bụ ikpe, aga m aga n'ihu kekọrịta na enwere m olile anya na (ọ bụ ezie na iji isi okwu nke isiokwu ndị nwere ike ịgwọta) ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na m hapụ ihe ọzọ, ana m ahapụ akara njiri mara, mee m amara (ya na ntụkwasị obi niile dị na ụwa) iji mepụta arụmụka nwere njikọ dịka nke a. Cheers
N'agbanyeghị na m dị naanị afọ 25, abụ m onye ọrụ Linux ogologo oge (2008), enwere m mmasị mgbe niile ịmara otu ihe si arụ ọrụ, ịhazi na njikarịcha nke ihe onwunwe. Abụghị m onye mmemme na enwebeghị m mepee koodu isi nke ngwanrọ ọ bụla gụnyere na nkesa m. Nkà ihe ọmụma m dị iche na nke gị, abụ m onye ọrụ "nkịtị", anaghị m asọ oyi sọftụwia nwere, n'ezie, nke ahụ abụghị isi ihe mere m ji eji Linux. Ihe kpatara m ji were Linux bụ n'ihi na ọ na-agba ọsọ ọsọ ma dịkwa nro, ọ na-akawanye oke ma enwere m ike ịmị mkpụrụ karịa, anaghị m echegbu onwe m nke ukwuu banyere nje (nke dị adị mana ọ bụghị nke ahụ), n'ihi ikike ịhazi (Ahụrụ m KDE n'anya) yana maka njikwa ngwugwu nke na-eme ka m nwee sistemụ emelitere na-enweghị nnukwu mbọ.
Dịka m kwugoro na ihe karịrị otu oge, nkà ihe ọmụma dị iche iche na-eme GNU / Linux nnukwu ekele
Ndewo. Nsogbu dị na ebumnuche "Open Source" abụghị naanị okwu gbasara ikike nchọpụta ikike na ikike ma ọ bụ ikesa nkesa mmemme ahụ: nkà ihe ọmụma Open Source na-egosi ịnakwere, itinye ma jiri ngwanrọ mechiri emechi, si otu a tufuo njikwa na nghọta nke otu.
Ihe m kwuru dị mfe ịhụ. Ezigbo ihe atụ nke ngwanrọ Open Source bụ Linux kernel dị ka ọ na-abịa na ndabara, nke a na-etinye ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala mechiri emechi na anyị amaghị ma ọ bụ nwee ụzọ nke ịmara ihe ha na-eme ma ọ bụ na-eme na kọmputa anyị. Ihe ngosiputa nke oma bu Ubuntu.
Ihe ngwanrọ ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ, n'aka nke ọzọ, anaghị ekwe ka akụkụ ọ bụla nke mmemme ahụ mechie. Ihe niile ga-emeghe kpamkpam (ma ga-enwerịrị ike gbanwee, kesaa na-enweghị mgbochi, wdg). Otu ihe atụ nke ụdị sọftụwia a bụ Linux-Libre kernel, nke wepụrụ akụkụ niile nke isi mechiri emechi, na ihe atụ nke nkesa nwere ike ịbụ Trisquel (nke na-agbagha ọtụtụ) ma ọ bụ Parabola.
Ihe nkesa m na - ahụ “agba ntụ” bụ Debian, nke bụ na mbụ 100% anaghị akwụ ụgwọ mana ịnwere ike ịgbakwunye ebe nchekwa gọọmentị nke nwere sọftụwia nke ịchọrọ ma ọ bụ nke ịchọrọ iji ya.
N'ikpeazụ, amaara m na mgbe ụfọdụ ọ na-efu, mana sistemụ arụmọrụ anyị na-eji abụghị nke a na-akpọ Linux. A na-akpọ ya GNU, ma ọ bụ GNU / Linux. Linux bụ kernel, dịka m kwuru.
Aghọtara m na mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe gbasara omume, mana ọ bụ njehie na - opekata mpe echere - anyị kwesịrị ịnwa iwepu. Android na-eji kernel Linux, ọ nweghịkwa onye na-agwa gị otu ahụ. E nwekwara sistemụ GNU nwere kernel ndị ọzọ, dịka BSD ma ọ bụ Hurd (ikpe Debian GNU / Hurd).
Ndewo Alan, daalụ maka ịkekọrịta, naanị m chọrọ ịkọwa ihe ole na ole ...
Nke mbụ na Linux (kernel) kesara dị ka ngwanrọ n'efu (GPLv2), koodu ya wee meghee kpamkpam, ihe ọzọ bụ ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-etinye n'ime ya na ihe ọzọ bụ ihe ndị na-ekesa (ma ọ bụ ndị ngwugwu) nke nkesa ahụ nyefere. ndị ọrụ (n'ọnọdụ ahụ ọbụlagodi nkesa ọnụọgụ abụọ ga-abụ Isi mmalite, ebe ọ bụ na ha anaghị ewepụta mmemme 100% n'ụzọ doro anya, ma ọ bụ kedu ka ị ga - esi kwuo na agbanwebeghị ebe ọ bụla n'oge mkpokọta?). Ugbu a ọ fọdụrụ iji mesie ike na nkà ihe ọmụma dị na ndị mmepe kernel niile bụ, "koodu ahụ kwesịrị ịdịịrị onye ọ bụla, ọbụlagodi na ndị ọkwọ ụgbọala", ọtụtụ nzukọ ekwuola maka ya, inwe koodu ahụ na-enyere onye ọ bụla aka . Mana ka anyị ga-eche eziokwu ahụ ihu na ụwa abụghị naanị ọcha, na ọtụtụ akụrụngwa na ụlọ ọrụ ndị mepụtara ya agaghị ahapụ ịmara ha maka onye ọ bụla, n'ihi ụjọ, enweghị ntụkwasị obi ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ.
Aghọtara m ihe ị na-ekwu maka kọmputa 100% n'efu, mana n'oge a nke siri ike nnweta, ọkachasị ebe ọ bụ na nnukwu ụlọ ọrụ nwere ihe nrụpụta ọpụrụiche niile. Ihe ọzọ bụ na enwere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ karịa ndị nwere mmepe, nke ahụ anaghị enyere aka. (M na-ekwu n'ihi na a debanyere aha m na listi nzipu ozi ha) Ma eleghị anya, ọ bụ ụzọ isi mesoo ihe karịrị otu ihe "na-atụ ụjọ" ndị chọrọ inye onyinye ...
N'ikpeazụ, nke a bụ echiche onwe onye, ​​Linux bụ okwu gị ama ama ama ama n'ụwa niile, Ubuntu gbalịrị inweta ọnọdụ ya ma na-aga nke ọma, gam akporo (n'ihi na ọ sitere na Google) enwetawo aha ya ... mana ọ bụrụ you na onye ọ bụla "nkịtị" ga - ekwu maka mpaghara X, ha na - ele gị anya ihu… kedu ??… wee sị Linux, ha zara… Ahhhh maka hackers na ndị IT about Aghọtara m ihe GNU / Linux bụ, echere m na m na-agbalị mgbe niile iji kọwaa echiche kwesịrị ekwesị, mana ọ bụrụ na emeghị m ihe ịga nke ọma, ana m arịọ mgbaghara maka ya.
N'ikpeazụ ... nke ọma, anyị niile nwere ike ịhọrọ, ọbụlagodi na Gentoo ị nwere ike ịhọrọ ikikere ị na-eji naanị sọftụwia n'efu, mana m (n'agbanyeghị ịtụle sọftụwia n'efu dịka ihe m chọrọ isonye) taa enweghị m ike ma enweghị ike ọbụna soro ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ iji nwee ike ịrụ ọrụ laptọọpụ m (Naanị m na-eji kaadị Intel na enweghị ngwaike ọpụrụiche ọ bụla), ọ bụghị na enweghị m agụụ, mana ọbụghị oge niile dị n'ụwa enwere m ike ịme ihe ọ na-ewe naanị mepụta ndị ọkwọ ụgbọ ala (ma chebe ha) maka laptọọpụ m. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na achọrọ m ihe 100% n'efu na uzo, m ga-eme ngwaike nke aka m ma wuo ngwanrọ m ka m nwee ike iji ya ... enweghị isi n'oge a, yana dịka m kwuru, isi awọ na agba m ga-anabata n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị naanị Enweghị m ike iji laptọọpụ, ma ọ bụ ekwentị, ma ọ bụ ihe ọ bụla: /
Ndewo ọzọ, kedu ka ọ mere?
Okwu nke kernel Linux bụ eziokwu gbasara ikikere ahụ, mana dịka ị kwuru, ha na-agbakwunye ngwa ngwa na ọ bụghị naanị na enweghị ikikere n'efu kamakwa amaghị ihe ọ na-eme. Nke a bu kpomkwem ihe ndi Open Source na-ekwuputa n'echiche nke iteghete nke ihe omuma ya, eziokwu nke ikwe ka emechiri emechi n'ime ngwanrọ a
Agwaara m ya na ọ bụghị n'ihi na ekwere m ma ọ bụ na m ekwenyeghi, kama ọ bụ n'ihi na n'otu edemede ị dere ihe ndị a:
«Ọ na-amasị m mgbe niile ịmara ihe mere ihe ji eme na kọmputa m, echekwara m na mmemme nke na-anaghị ekwe ka ị mata ihe na-eme bụ onye iro kachasị ukwuu ị nwere ike inwe.
N'oge a, Open Source na Free Software kwenyere (ọ bụ ezie na ha achọghị ịnabata ya), na ọ bụ na otu maka ebumnuche bara uru na nke ọzọ maka ebumnuche ziri ezi, ha chọrọ ka ndị ọrụ nwee ike itinye aka ma mụta site na koodu isi.
Isi ebe nsogbu bidoro bụ gbasara nnwere onwe ikesa. Open Source bụ ntakịrị ihe mgbochi karịa sọftụwia efu, nke a bụ mmalite maka ọtụtụ esemokwu nke nkà ihe ọmụma. »
N'uche m, nsogbu ahụ anaghị amalite site na nkesa ngwanrọ ahụ (ọ bụ ezie na ọ bụ isi okwu dị mkpa nke esemokwu) mana ịmara ihe mmemme niile anyị na-eme na-eme ma ọ bụ anaghị eme (Software efu), ma ọ bụ ịmara ihe ha na-eme naanị otu akụkụ - ikekwe buru oke ibu- n'ime ha (Isi mmalite).
Mana n'ezie ị kwenyere. Anyị anaghị ebi n’obodo ebe ụlọ ọrụ na-achọ ọdịmma mmadụ ma wepụta onwe ya ka ọ pụta koodu ndị ahụ, na-ahapụrụ ha uru.
Inwe igwe onwere ego 100% dika ozi nke FSF abughi nke onye obula, n’eziokwu amaghi m ma o di ugbu a. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na mpaghara nke chọrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala, ihe ngwọta ha na-enye gị bụ ịtụfu ya ma zụta ọzọ, ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị na ngwanrọ n'efu ma ọ bụ ego dị mkpa. Ọ bụrụ na enweghị ndị ọzọ n'efu maka nke a ma ọ bụ mmemme ahụ, ị ​​ga-akwụsị iji ya. Ọ bụrụ na ị nwere ekwentị, ọ ga-enwerịrị onye ọzọ arụnyere ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ọkara nke ihe ndị ahụ.
Echere m na ụdị ... nzuzu, enweghị ọmịiko na - ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha enweghị mmasị na ya - ịnụbiga ọkụ n'obi ókè, na-eme ihe ọjọọ karịa mma iji nweta sọftụwia n'efu.
Ekwughi m banyere GNU / Linux n'ihi na abụ m onye ofufe nke FSF (ị ga - ahụ na anaghị m), mana echere m na ha ziri ezi n'oge ahụ. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ maara ya dị ka "Linux" na sistemụ (Amaghị m onye ọ bụla na mpụga ịntanetị nke na-ekwu GNU / Linux, n'agbanyeghị na anaghị m eso ndị kọmputa), mana m na-ahụ blọọgụ na mgbasa ozi gbasara mgbasa ahụ ọ bụrụ na ha matara na ọ bụ izi ezi ikwu ya. Ọ bụrụ na Hurd pụta echi (nke m nwere obi abụọ nke ukwuu) ma ọ bụ kernel ọzọ mepụtara nke etinyere n'ọtụtụ nkesa, gịnị ga - eme? Ekwesịrị ịkpọ peeji a "FromHurd", iji kwuo nke kachasị. Echere m na kernel nyere ihe dị mkpa karịa sistemụ arụmọrụ n'onwe ya.
Anaghị m ekwukarị okwu, mana mgbe m mere, ana m ewere ohere ịkpọ aha aha.
Ekele na jisie ike
Ọ dị mma, na-ekele gị nke ukwuu maka ịme ya Alan 🙂 Ọtụtụ oge ọ na-esiri ike ịkọwapụta ihe niile dị na obere oghere (na nke a, n'ezie, enwere ike ịgbakwunye otu akwụkwọ na ndepụta ahụ na-ekwu okwu a na posts ndị a) dị ka ị na-ekwu, ha bụ isiokwu siri, ewerewo m akụkụ nke otu, ma ọ dịkarịa ala akụkụ nke m ghọtara na m nwere ike ịkọwa na obere oghere dị otú ahụ, ma o doro anya na ọ gaghị ezuru iji nwee ike ime ya. Anyị ga-atụle ọtụtụ ihe gbasara nsogbu kernel (ma dị ka onye nrụpụta, dị ka onye ọrụ, dị ka onye na-anọchite anya mpụga, yana n'okwu gbasara iwu) iji nwee ike ịkọwapụta ọnọdụ ahụ nke ọma ma rute otu nkwekọrịta, ma eleghị anya nke ahụ a ga-ahapụ maka ọkwa ọzọ 😉
N'ikpeazụ (nke a bụ echiche onwe onye ọzọ), m na-atụle, ebe m gụrụ ọtụtụ akara nke koodu ntinye n'ọtụtụ mmemme GNU na Linux, na n'oge a ọ gaghị ekwe omume ịmara "ihe ọ bụla mere na usoro ọ bụla. , na mgbakwunye na ịmara ọtụtụ ihe ederede, ọ ga-adị mkpa ịmara etu koodu ahụ si eme ihe ọ na-eme, ugboro ole, gịnị kpatara ya, na ajụjụ ndị ọzọ ọ bụrụ na anyị emee ka ha bawanye site na mmemme ole achọrọ iji rụọ ọrụ opekempe sistemụ (Na ẹbọ Linux Site ọkọ), ha na-arụ ọrụ dịtụ titanic. Anaghị m ekwu na nke a kwesịrị ịkwụsị ịbụ ihe dị mkpa, mana na n'oge a, yana ijeụkwụ nke teknụzụ na-aga n'ihu, ịmara kpọmkwem ihe na otu esi eme ihe ọ bụla agaghị ekwe omume. Okwu a bịara na Open Source (na akụkụ ụfọdụ) na Free Software (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ozuzu ya) ma ọ dịkarịa ala koodu ahụ dị maka onye na-achọ ịmata ihe, nke ahụ na-eme ọtụtụ ihe dị iche ma e jiri ya tụnyere ihe niile bụ ri
Alan na ChrisADR, ọ bụrụ na-amasị gị, a na m atụ aro ka m dee ederede na - enweghị ihe ọ bụla - nke onye ọ bụla nwere ike ịkekọrịta ma gbanwee ya, bụ ebe a kọwara ụfọdụ isi, gụnyere ndị a:
1 - Imetu aka na okwu nke nuances, na-eme ka ihe atụ nke isiokwu a na-ewetara ugbu a (na-egosipụta ọdịiche dị n'etiti ngwanrọ na-emeghe ma na-emeghe) nke m chere na ọ dị ezigbo mma, (enwere ọtụtụ ndị nwere ụdị echiche, ndị na-eche na ha bụ otu, na-eche echiche na-ezighi ezi dịka ọmụmaatụ: otu dị n'asụsụ Bekee ma onye ọzọ nọ n'asụsụ Spanish).
2 - Ihe a na-ahụkarị, ịkpọ aha nsogbu dịka GNU / Linux (nke a bụ isiokwu ekpuchilarị, mana anyị nwere ike iji ya gụnye ụfọdụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta ma kpọọ aha).
3 - Echiche ụgha nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ (Edegola m isiokwu a na blọọgụ m), n’etiti ha, akụkọ ifo ma ọ bụ nkwenye siri ike na iji sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ị gaghị enwe ego wee kewaa echiche na ọnọdụ nke EGO na EGO N’efu.
Ana m agwa gị okwu a n'ihi na enwere m nchegbu nwa oge ka m dee ya na njedebe m maara na m ga - eme ya (n'ihi na agwalarị m ha n'ụzọ nkewa na ederede m dị iche), mana m na - akpọ gị ka ị mee ya na ụzọ mmekorita iji lekwasị ya anya wee nweta mmetụta na mgbasawanye dị ukwuu na blọọgụ. Banyere.
Ọ dị ka ezigbo echiche nye m, n'ezie na blọọgụ m, m ga-akwụsịkwa ide banyere isiokwu a karịa otu oge ka m wee nwee ike inwe ya ma ebe a ka e wee kesaa ya ebe niile. Amaghị m ma ọ bụrụ na otu edemede ga - ekpuchi ọtụtụ ozi (enwere m omume ịghara ide ihe karịrị okwu 1500, ma ọ bụ opekata mpe m 😛) N'ezie. Ọ bụrụ na Alan nwekwara mmasị, anyị nwere ike ịhazi ya wee hụ ihe na-apụta 🙂 Ekele
Echiche ahụ nke "nkà ihe ọmụma" ị na-egosipụta dịtụ ... mbelata. Nkà ihe ọmụma bụ echiche ụwa, ha bụ ụdị echiche na usoro echiche dị iche iche iji kọwaa ihe dị adị
Ọ na-ewute m nke ukwuu na ọnụọgụgụ nke ọtụtụ obodo ndị na-eme ihe ọmụma na-apụ kpamkpam site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-eleghara isiokwu ndị dị ka nkà ihe ọmụma ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya.
Ọbụna maka ebumnuche nkwukọrịta ezighi ezi iji ntụle 3 tụnyere nke grayscale
Iche onye Ochichi, Imepe na Onwe n’ụzọ dị otu a bụ ịhapụ ha na esemokwu dị n’etiti ha, nke bụ mmetụta ha na ọha mmadụ na ụzọ ha si enweta mmetụta a. Ọ bụ depoliticization zuru ezu nke Mgbakọ
Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ na - eleghara "ọ bụ sọftụwia m ka m na - eme ihe m chọrọ" ọbụlagodi na ọ na - ewute mmadụ
Mepee ALSO na-eleghara mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya anya, ọ na-ejedebe naanị ịsị na a na-ahụ koodu ahụ iji nweta uru kacha nta maka ọha mmadụ mgbe sọftụwia kwuru nwere mmetụta ... n'agbanyeghị ma ọ na-emerụ ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe atụ kachasị mma bụ gam akporo na ngwaọrụ niile nwere ngwaọrụ onyunyo ọ nwere ... yana ndị na-agbachitere oghere mepere emepe n'ihi na ha nwere naanị mmasị ịme koodu ahụ.
El Libre bụ naanị onye na-ekwu na a ga-eleba anya na mmekọrịta mmekọrịta a, na-azọrọ na a ga-ahụ koodu ahụ ka ọha mmadụ wee rite uru yana edere ya na-elekọta ụfọdụ ụkpụrụ ndị bụ isi ka ọ ghara imerụ ndị mmadụ, obodo, wdg ... na ya mere ka onye ọbụla dere ya ghara inweta ike dị egwu
Nkwupụta ị na-eme bụ kpam kpam utopian. Na nke a bụ naanị esemokwu nke echiche ebe akụkụ niile hà nhata .. ndị na-ekwenyeghi ga-abụ ndị emechiri emechi na-achọ ịmanye onwe ha ..
N'ime obodo anyị enwere otu ike dị iche iche na ọha na eze, enwere sọftụwia na - enweghị ike ịchịkwa ikike nke ikike yana echedo ndị na - enweghị ike (niile, ebe ọha mmadụ nọ na teknụzụ)
Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ihe kachasị njọ anyị nwere ike ime na teknụzụ ozi na ọha mmadụ, ọ dị mkpa ịghachị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na na enwere m obi ụtọ na FSF anaghị ejedebe onwe ya dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ụjọ na-ekwu maka sọftụwia na teknụzụ kama raara nye oru ndoro-ndoro ochichi
Naanị iji dokwuo anya, ịkọwapụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị anaghị eche na echiche gị banyere ụwa ziri ezi ma wuo mmemme dabere na ya, mana iwulite mmemme ka ị nwere ike ma mana iburu n'uche mmemme enwere ike iji
Ndewo Diego, daalụ maka ịkekọrịta, ma site ugbu a gaa n'ihu, achọrọ m ịkọwa na e nwere ọtụtụ isi ihe nwere ike ibilite n'ihi ịkọwahie ihe edere ...
Nke mbu: Dịka o doro anya na ederede ahụ, ọ bụ isiokwu dị mgbagwoju anya, nke sara mbara ma sie ike ịme, Agaghị m ede nkwekọrịta ma ọ bụ nchịkọta na nkọwa niile gbasara ụkpụrụ na ụkpụrụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze n'ihi na naanị:
1- ebe a abụghị ebe ahụ.
2- nke a abụghị oge.
Ihe m na-eme bụ inye echiche m (dịka onye, ​​ọ bụ ezie na ọ bụghị ọkachamara na isiokwu ahụ, n'ihi na abụghị m, enweela ohere ịme ndị metụtara ya ma n'otu oge ahụ mepụta echiche gbasara isiokwu ahụ ) na ọ bụ ezie na ị na-atụle m mbelata Mbelata, n'ihi na m na-amụ nkà ihe ọmụma, ọbụna a obere omume na ụkpụrụ ọma, na m nwere ike ikwu na m na-atụle ya na a ezi usoro iwu usoro nke na-emetụta ọnụọgụ nke ohere m ga-eji maka nkọwa.
M na-akpọ ha nkà ihe ọmụma n'ihi na ha bụ n'ezie echiche nke ụwa nke ọ bụla n'ime "akụkụ" nwere n'ihe ndụ na ọha mmadụ kwesịrị ịdị.
Na ka ị kwuo ntakịrị maka etu isi awọ, enwere ihe Libre na-anaghị atụgharị uche, ma ọ bụ opekata mpe, ọ naghị edozi ya taa ... Ka anyị were obere oge na Libre bụ ụkpụrụ ụwa, enweghị sọftụwia nwere ma ọ bụ ihe niile ụlọ ọrụ ndị ahụ, gịnị na-eme ndị niile na-adabere ma na-arụ ọrụ ahụ? Ndi nde a na-emepụta site na akụ na ụba (ọbụlagodi na ekesara ha nke ọma) ga-egosi n'ụzọ magburu onwe ya iji dozie vidiyo nke ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na ezinụlọ ha? Ha esoghi n’otu obodo ha kwuru na ha na-echebe? Dịka m kwuru n'isiokwu ahụ, ọ bụghị ihe niile nwere ike ịbụ oji ma ọ bụ ọcha, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị achọghị ya, a ga-enwerịrị nuances n'ihi na ndụ abụghị naanị oji ma ọ bụ ọcha, nke ahụ na-arụ ọrụ naanị maka utopia, ọ na-arụkwa naanị mgbe Ugwu bu oke ocha, nihi na oburu na oji, anyi na enwe nsogbu kariri nke uku.
Anaghị m ekwu na isi ihe a bụ iji dochie okwu ahụ kpamkpam, ihe m kwuru ma mesie ike ọ bụghị ịga ókè. Ọ bụghị ruo n’ókè nke ịkpọ onye ụjọ ọzọ maka ime ma ọ bụ emeghị ihe ọ bụla o lere anya na o ziri ezi nihi na echiche ya nke ụwa dị otu ahụ. Ma ọ bụ ị nwere ike ịgwa nwatakịrị na nna ya / nne ya bụ onye ụjọ maka inye ya nri n'ọrụ ya n'ime ụlọ ọrụ ndị ọzọ?
Anaghị m agọnahụ na enwere ndị otu ike na esemokwu, n'oge a ana m ahụ mbọ ndị FSF na-emeghị nke ọma dị ka ihe a ga-echegharị, n'ihi na ka anyị chee ya ihu, ụlọ ọrụ anaghị eche banyere FSF, ha anaghịkwa eme "ndị nkịtị" onye ọrụ, na FSF ọ naghị enyere aka mee ka ihe a bụrụ ezigbo enyi, mana na ntụle, ọ na-atụ ndị nwere ike ịgbaso ụjọ ụjọ na oke oke. Eleghi anya ọ bụ ya mere ọtụtụ "sọftụwia" sọftụwia ji anwụ obere obere, n'ihi na ugbu a, enwere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa ndị mmepe ma enwere ike ọ bụrụ na ọ ga-abụrịrị Free World Foundation ma ọ bụ ihe ọzọ n'ihi na ọnụego ngwanrọ a agaghị ga-aka ekpe: /
Agam a acho ime ka o dokwuo anya n'ihi na odi ka ighotaghi m nke oma na ihe ufodu
Banyere agba ntụ ma ọ bụrụ na m ghọtara gị, ị na-ekwu na ụwa nwere ikike na-emeghe ma na-emeghe na ndị mmadụ na-enweta ahịa site na ahịa ha mepụtara yana ịsị na nnabata nke ngwanrọ n'efu ga-ahapụ ha ka ha gba ọtọ
Ma ebe ahụ ka ajụjụ a batara. Saidnye kwuru na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ga - eji dochie nke ndị nwe ya na nke mepere emepe? .. Ihe ga - eme bụ na ndị nzuzo na ndị mepere emepe nwere onwe ha.
Ahụrụ m gnu / Linux n'anya mana .. ezigbo mmeri ga-abụ na windo wepụtara (ya bụ, laghachi na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ) (naanị inye ihe atụ) ọ nweghị onye na - ekwu na ahịa windo niile kwesịrị ịnwụ, ọ ga - abụ ara. Ikwesighi ịhapụ ndị niile bi na ngwanrọ a
N'ezie, ụfọdụ ndị na-ebi naanị site na uru dị iche iche nke softwares ndị a ọ bụghị site n'ahịa ha na-emepụta ... n'otu ụzọ ahụ ụlọ ọrụ ndekọ na-ebi site na ịkwakọrọ onye na-egwu egwu, ha ga-apụrịrị ma ọ bụ megharịa iji mee ka ahịa ọhụrụ pụta , ihe a ga-edozi ya n'oge oge, nke a abụghị ajụjụ nke "ka anyị nweta ngwanrọ n'efu na onye ọ bụla fọdụrụ n'okporo ámá, kpoo ya" ga-abụ ekwekọghị "ka anyị nweta ikike ka onye ọbụla ghara iji ha"
Banyere nke ọzọ, nke "ịghara ịgabiga oke", ọ ga-adị mkpa ịhụ na ị kọwara onwe gị dị ka oke obi ... n'ihi na agaghị m agwa nwatakịrị ma ọ bụ nna ya ihe ha ga-eme ... mana ebe a anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ raara onwe ha nye ịhapụ onye ọ bụla na-enweghị ọrụ ọ bụla
Itlọ ọrụ nke ọ bụrụ na m ga-agwa ha na IKPỌR a ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe ọha nwere ike ịmetụta oke, naanị n'ihi na ọ na-emebi ọdịmma ha ma ọ bụ n'ihi na ha amaghị ọnọdụ ha ga-ewere, bụ omume ụjọ. Ndi mmadu nile na ulo oru nile nwere onodu ochichi ma obu nke nta
Mana iwu nyere ndị ụlọ ọrụ ahụ ịkọwa ha, ha enweghị ike ịpụ ịsị "oh mba, nke a abụghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị"
N'ihe gbasara FSF, ahụghị m ịnụbiga ntị ókè nke ị na-egosi, m na-agbasochi nzọụkwụ nke ntọala ahụ anya ma na m na-ejidekwu ụbọchị niile na ndị mgbasa ozi na-akpọ ya "ịnụ ọkụ n'obi" ịnwe ọnọdụ ụfọdụ ma bụrụ onye na-enweghị mgbagha n'agbanyeghị ọnọdụ gị ọ bụ agbanwe agbanwe ma ọ bụ na ọ bụghị. Eziokwu ahụ bụ na ị naghị ekwe ka ọtụtụ ndị gbagọọ gị adaala, a na-akpọ ya ofufe n'echeghị echiche ma imirikiti ihe ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị
Ee, enwere m ike ikwenye na usoro mgbasa ozi ha dara ogbenye ma na ha enweghị echiche etu esi ahazi usoro nkwukọrịta na mgbakwunye na ha enweghị mmefu ego iji hazie nnukwu mkpọsa mana ... site na Chukwu, opekata mpe ha na-agbalị ịkọwapụta na anyị kwesịrị ime ihe na nke a ndọrọndọrọ ọchịchị, n'adịghị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ hapụrụ mgba ọ bụla ogologo oge gara aga
Ndewo Diego, daalụ nke ukwuu maka ịzaghachi 🙂 Ọfọn, n'eziokwu, nke a ga-abụ isiokwu kwesịrị ogbako / mkparịta ụka / ihe ngosi, ebe ọ bụ na okwu ndị a dị mkpirikpi ọ na-esiri ike ijide eri na ịhazi echiche n'ụzọ ziri ezi ka ọ ghara ikwe omume ịhapụ ọdịiche maka nkọwahie. Mana m ga-anwale ọ bụla 🙂
Ka anyị bido n’ebumnobi mbụ, ntọhapụ nke sọftụwia nwere nke ya. Nke a bụ ebumnuche (n'echiche m) ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke achọrọ dị ka ịchọrọ iwepụ mmanya ma ọ bụ sịga na mbara ala. Mana aga m anwa ịkọwa isiokwu a ntakịrị oge. Eziokwu nke privatization ma ọ bụ nnwere onwe nke ihe na-abịa site na ọdịdị mmadụ n'onwe ya, ọ bụ ndị a (dị ka mmadụ ma ọ bụ dịka nzukọ) na-ekpebi ịmanye ma ọ bụ na-egbochi ụfọdụ ihe. N'otu ụzọ ahụ, ịnwa iwepu privatization bụ ihe yiri nke ịnwa iwepụ mmadụ, n'ihi na ọ bụ ihe e bu pụta ụwa mmadụ inwe mmekọrịta a nke ọma na ihe ọjọọ (dịka mmadụ ma ọ bụ ọha mmadụ).
Na agbanyeghi na ụlọ ọrụ ụfọdụ enwere ike ịtọhapụ, na ndị ọzọ nke a ga-apụta mbibi zuru oke nke ahịa ha na ndị ahịa ha, ebe m gosipụtara na mbụ, enwere ike iji ngwaahịa ha tụnyere ọgwụ. Adịpụta bit si ya nkịtị definition: «Umi na-eji na ebumnuche ime ihe banyere sistemu ụjọ iji mee ka mmepe ahụ ma ọ bụ ọgụgụ isi dị elu, na-agbanwe ọnọdụ gị ma ọ bụ na-enwe mmetụta ọhụụ, na onye ugboro ugboro oriri nwere ike mepụta ndabere ma ọ bụ nwee achọghị mmetụta. "
Kedu ihe ị chere mere mgbasa ozi ọhụrụ maka sistemụ arụmọrụ, mmemme, akụrụngwa, wee yie uche gị egwu? Ọfọn, ma ọ bụghị ya, ọ gaghị ere ya, ma ọ nweghị onye ga-achọ ya, ebe ọ bụ na achọghị m ngwaike maka egwuregwu, n'ihi na anaghị m ekepụta ndabere gaa egwuregwu.
Ka anyị gaa n'eziokwu ahụ na ntọhapụ nke naanị otu ma ọ bụ otu mkpokọta ga-etinye anyị na naanị anyị n'akụkụ nke ndị ọzọ, nkedo a nke nnwere onwe kwesịrị ịbụ ụdị oke na enweghị mba Ndi mmadu ndi mmadu nwere ike weghara ahia, ma dika m kwuworo, nye ọdịdị mmadu n'onwe ya, nke a bu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ utopian.
Na imetụ aka na okwu nke abụọ ntakịrị, "oke" na-eme mgbe otu ma ọ bụ karịa ndị otu nzukọ na-eme ka ebum n'uche ha wee mezie ya ka ọ bụrụ nke na-egosi oke ịnụ ọkụ n'obi. ike ekweghị ibe nọrọ banyere echiche ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ. Anaghị m ekwu na a ga-eme ka ọ ghara ịkpa ike, kama, mara ezigbo, ebe ọ bụ na ahụ dị ka FSF kwesịrị ịdị ịdị elu nke ozi ha na-akpọsa. Site na nke a, m na-ekwu na ihe ị na-ewere dị ka enweghị usoro nkwukọrịta, ndị ọzọ nwere ike ịhụ ya dị ka enweghị nsọpụrụ ma ọ bụ iro, na nke a na nzukọ na-azọrọ na ọ bụ onye nchebe nke ụkpụrụ ụkpụrụ elu, ọ bụ kpam kpam ekwekọghị na ozi.
N'akụkụ a, ọ dị m ka Pope Francis bụ ezigbo ntụnye aka, ọ bụ onye, ​​dịka ị na-ekwu, anaghị enye ogwe aka ya ịgbagọ n'ihi ihe ọtụtụ ndị na-ekwu, mana nke ahụ apụtaghị na ọ kwụsịrị ịgwa ndị ahụ eziokwu, ma karia ikwu okwu. kwusi ikwu ya caridad. Ma ọ bụ eziokwu, otu bụ agbụ inwe echiche banyere ezigbo nsogbu, mana echiche a enweghị ike ịbụ ihe kpatara iji zoo aka n'ụzọ mkparị, ma ọ bụ nwee mmegide nke echiche ọ bụla ọzọ, ebe ọ bụrụ na anyị kwenyere na anyị nwere echiche ziri ezi, nke ahụ gosipụtara n'ụzọ nke ibi na ịga n'ihu, ọ bụghị naanị na ihe ekwuru.
Enwere m mmasị n'echiche a, n'ihi na echere m na ezigbo echiche dị ka oji na ọcha nwere ike bụrụ ihe na-emebi echiche nke ha n'ihi na ha mechiri emechi ma ha ahụghị ọzọ. Ana m ekekọrịta ntụgharị uche na ịghara ịsị "nke a ka nke ọzọ mma", ọkachasị n'ụwa nke Linux na windo ma ọ bụ mac, n'ihi na anyị niile nwere mkpa dị iche iche na ụzọ iche echiche, Ahụrụ m Linux n'anya, oghere mepere emepe na ngwanrọ n'efu, mana na ụwa a ị ga-ezute ndị ọzọ mgbe niile na-eche echiche dị iche na nke gị ma jiri sọftụwia nwere ikike, ana m anwa igosi ha ụzọ ndị ọzọ dị ugbu a, ọ bụghị itinye ma ọ bụ mee ka ha belata, nke mere na a gbara ha ume iji ha.